हेर्नुहोस् चार्ट बिवरण –चीनको पछिल्लो अवस्था के छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more हेर्नुहोस् चार्ट बिवरण –चीनको पछिल्लो अवस्था के छ ?
हेर्नुहोस् चार्ट बिवरण –चीनको पछिल्लो अवस्था के छ ?	आफ्नो युद्ध लगभग जितेको चीन–आजभोली अरुका लागी युद्ध लडिदिन तयार छ !
चैत १२ गते, २०७६ - १७:२२
आफ्नो युद्ध लगभग जितेको चीन–आजभोली अरुका लागी युद्ध लडिदिन तयार छ !
काठमाडौं । संसारले युद्धकै रुपमा परिभाषित गरेका कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईमा चीन लगभग सफलताको नजिक देखिन्छ ।
कुलमा ८१ हजार २ सय १८ संक्रमितमध्य जम्मा ३ हजार २ सय ८१ ले जिवन गुमाए । उता अर्कोतिर ७० हजार संक्रमित नपुगेको इटलीको मृत्युदर भने एकदमै उच्च हुन पुग्यो । इटलीमा ६९ हजार १ सय ७६ संक्रमितम्धय ६ हजार ८ सय २० जनाले जिवन गुमाईसकेका छन् ।
यि नतिजाहरुले चीन रोकथाम र उपचारका लागी कति गम्भिर रुपमा लागेको थियो भन्ने देखाउँछ । चीनमा उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या पनि ठुलो छ अर्थात ७३ हजार ६ सय ५० जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
अहिले चीनसँग संक्रमितको संख्या ४ हजार २ सय ८७ मात्रै छ । जसमध्य गम्भिर अवस्थामा रहेकाहरुको संख्या ठुलो छैन । १ हजार ३ सय ९९ गम्भिरहरुले निकै राम्रो उपचार पाईरहेको बताइएको छ ।
अहिले चीनमा आकस्मिकरुपमा निर्मित अस्पतालहरु बन्द भईरहेका छन् । युद्धस्तरमा लागेको चीनले अति प्रभावित इटलीमा विषेशज्ञहरुसहित स्वास्थ्य सामाग्रीमा सहयोगमात्रै गरिरहेको छैन, आजभोली अन्य प्रभावित मुलुकलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताईरहेको छ ।
चीनको बुहानमा पछिल्लो एक हप्तामा १ जना पनि नयाँ संक्रमित नभेटिइएकोमा अन्तिमतिरमात्रै १ जना भेटिएको थियो । चाइनिजहरु बताइरहेका छन् कि उनीहरुकोमा आजकल देखिएका फाट्टफ्टट नयाँ संक्रमितहरुलाई देशभित्रका नभई बाहिरी मुलुकबाट आएकाहरु हुन् ।
चार्टमा हेर्नुहोस् : चीनको अवस्था –
चैत १२ गते, २०७६ - १७:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ३७८ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य...
टिकटक प्रतिबन्धको परिणाम –चिनियाँ मोबाइल कम्पनि बाहिरियो आइपिएलबाट
काठमाडौं । लद्दाक सिमा क्षेत्रमा चीन र भारतबिच तनाव बढेपछि भारतले बहुचर्चित चिनियाँ एप्स टिकटक लगायत...
काठमाडौं । विवादास्पद कम्पनि ओम्नी ग्रुपले जनकशिक्षा सामाग्री केन्द्रले खरिद गर्न लागेको टेण्डरमा...
प्रेमराजा महत दम्पत्तिमा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । लोकगायक प्रेमराजा महत दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । महतले समाजिक संजालमार्फत आफु...